Custom Metal Namplates မှထုတ်လုပ်သူနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ အဲဒ်
1998 ခုနှစ်မှစ. သတ္တုနာမည်များကိုဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ရန်ကတိကဝတ်ပြုခဲ့သည်
Electroformed Nickel တံဆိပ်
သတ္တုတံဆိပ်များ - သင်၏ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်သံအမတ်ကြီး
အဲလစ်၏အဓိကထုတ်လုပ်မှုသည်သံမဏိ, တိုက်တေနီယမ်, ကြေးနီ, ဆက်နွယ်မှု, ချုံ့ခြင်း, ဓာတ်တိုးခြင်း, အောက်အောင်နိုင်ခြင်းစသည်တို့ကိုစသည်တို့ပါဝင်သည်။
Professional Requangangle Aluminum တံဆိပ်ထုတ်လုပ်သူ, စတုဂံ aluminum တံဆိပ်နှင့်ပတ်သက်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ။21 နှစ် (21 နှစ်) သည်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာဒီဇိုင်းမှထုတ်ကုန်မှိုထုတ်လုပ်မှုမှိုထုတ်လုပ်ရန်ထုတ်လုပ်ရန်အတွက်ထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံ, link တိုင်းသည်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုမှထုတ်ကုန်တိုင်းသည်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းခြင်းနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောနိုင်ငံခြားမှခေတ်မီဆန်းပြားသောပစ္စည်းများကိုမိတ်ဆက်ပါ, ထုတ်လုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်တစ်ခုလုံးကိုရွေးချယ်ပါ အများဆုံးပြီးပြည့်စုံသောအရည်အသွေး။
အကောင်းဆုံး rounded cd လိုင်းများအလူမီနီယမ်တံဆိပ်ပေးသွင်းသူ Alice စက်ရုံ
rounded လူမီနီယမ်တံဆိပ်ပေးသွင်းသူကိုရှာဖွေနေ? rounded အလူမီနီယံတံဆိပ်နှင့်ပတ်သက်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ။ကျနော်တို့ (အဲလစ်) သည် 21 နှစ်ကြာပရော်ဖက်ရှင်နယ်သတ္တုအမှတ်အသားပြ Pustomingrising လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်0န်ထမ်း 100 ကျော်ရှိသည်, 1500 စတုရန်းမီတာထုတ်လုပ်မှုအခြေစိုက်စခန်းရှိပြီး, စျေးကွက်ယှဉ်ပြိုင်မှု၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်နှင့်စီးပွားရေးလမ်းကြောင်းကိုလိုက်နာရန်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြား e-commerce ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးပြီး,
အကောင်းဆုံးတရုတ်အကောင်းဆုံးအလူမီနီယမ်တံဆိပ်ထုတ်လုပ်သူများ - အဲလစ်စက်ရုံအပေါ်စျေးနှုန်း - အဲလစ်
Professional Aluminum တံဆိပ်ထုတ်လုပ်မှု, အကောင်းဆုံးလူမီနီယမ်တံဆိပ်နှင့်ပတ်သက်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ။Alice အကောင်းဆုံးတရုတ်အကောင်းဆုံးအလူမီနီယံတံဆိပ်ထုတ်လုပ်သူများ - အဲလစ်စက်ရုံနှင့်0န်ထမ်း 100 ကျော်သောအဲလစ်, ကိုယ်ပိုင်စက်ရုံနှင့်0န်ထမ်း 100 ကျော်သည်တူညီသောအရည်အသွေးနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ကျနော်တို့ (အဲလစ်) သည်ပရိဘောဂအခွင့်အလမ်းများထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီး, အလူမီနီယမ်, ကြေးနီ, ကြေးနီ, PVC တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
အလူမီနီယမ် Altoy Aluminum Begge ထုတ်လုပ်သူများ - Alice တွင်လူမီနီယံ Aluminum Begge ထုတ်လုပ်သူများ၌လူမီနီယံ Aluminum Alice တွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်
အဘယ်ကြောင့် rosse alice?
Alice သည်စတုရန်းမီတာ 2000 ကိုဖုံးလွှမ်းထားပြီး, QC, ဒီဇိုင်း, ထုတ်ကုန်, ကုန်ပစ္စည်းမြှင့်တင်ရေး, ဖောက်သည်များ၏ Sevice တို့အပါအ0င်ဤနေရာတွင်အလုပ်လုပ်သောပစ္စည်း 50 ကျော်ရှိသည်။သတ္တု Anchlates သင့်အတွက်။
ယခုအချိန်အထိအဲလစ်သည်ကိုယ်ပိုင်မူပိုင်ခွင့်5ခုရှိပြီးတစ် ဦး ချင်းလိုအပ်ချက်များအတွက်0န်ဆောင်မှုပေးသည်။ ၎င်းသည်ကျော်ကြားသောကုမ္ပဏီများ, Fox ဥပမာ - Huawei, Red Apple စသည်တို့နှင့်အတူရေရှည်မဟာဗျူဟာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စီးပွားစွမ်းဆောင်ရှင်လမ်းညွှန်ရေးအဖွဲ့, အလွန်အလားအလာရှိသောအသိဉာဏ် + စက်မှုကွင်းဆက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
အဲလစ်သည် 1998 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ချိန် မှစ. တိကျသောထုတ်ကုန်ကိုအပ်နှံခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်ပရိဘောဂများနှင့်အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများနှင့်အီလက်ထရောနစ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများလယ်ကွင်းကိုစိတ်သဘောထားတစ်ခုအဖြစ်အာရုံစိုက်သည်။
အဲလစ်၏အဓိကထုတ်ကုန်အားလုံးသည်မျိုးစုံရှိသည်သတ္တု Anchlates သံမဏိ, တိုက်တေနီယမ်, ကြေးနီ, အလူမီနီယမ်မှပြုလုပ်သောသံမဏိ, actching, compression, အောက်အောင်, polishing, polishing, polishing, polishing, polishing, ရော်ဘာ, အဲလစ်အားလုံး, frosting system, အိမ် frosting နိမိတ်လက္ခဏာ, အိမ်ကြော်နံပါတ်, ဘားကုဒ်စတစ်ကာများစသည့်ကဒ်ပြားအားလုံးကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
"အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံး, ထိရောက်မှုအကောင်းဆုံး" ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဖွံ့ဖြိုးပြီးရူပါရုံအဖြစ်ယူဆောင်လာသည်။
သတ္တုတံဆိပ်များပရိဘောဂတွင်မည်သည့်နေရာတွင်ရှာဖွေနေသည် - အဲလစ်
အဲလစ်၏အဓိကထုတ်လုပ်မှုသည်သံမဏိ, တိုက်တေနီယမ်, ကြေးနီ, အလူမီနီယမ်သို့သံမဏိ, actcing, compression rocing, အောက်အောင်, polishing, polishing, Polishing,ပရိဘောဂများအတွက်သတ္တုတံဆိပ်များ နောက် ... ပြီးတော့။
အဆိုပါနေမှုကိုချေဖျက်စက်၏နိယာမဟာ crank မောင်းများနှင့်ဖွင့်နှင့်အဆင်း slider ကိုရွှေ့ဖို့လှံတံယန္တရားချိတ်ဆက်လျက်, သံမဏိပန်းကန်ဖွဲ့စည်းရန်ဖို့ drawing သေမောင်းထုတ်ရန်ဖို့မော်တာကနေတဆင့် flywheel မောင်း, နှင့် clutch နှင့်ဂီယာဂီယာမှတဆင့်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ စာနယ်ဇင်းတစ်ခုအတွင်း slider ကိုတစ်ပြင် slider ကိုခွဲခြားထားတဲ့နှစ်ခုလျှော, ရှိတယ်လို့ဒါခေါ်နှစ်ဆအရေးယူနည်းလမ်းများ။ အတွင်း slider ကိုပုလာကြတယ်သို့မဟုတ်သေဆုံးသည့်မှိုကို၎င်း, ပြင် slider ကို drives တွေကိုမှိုပေါ်မှအလွတ်ကိုင်ဆောင်သူလက်စွပ်မောင်း။ သံမဏိပန်းကန်၏အစွန်းကိုနှိပ်ဖို့တချိန်တည်းမှာပင်, ထိုကွက်လပ်ကိုင်ဆောင်သူပထမဆုံးရွေ့လျားနှင့်လမ်းပိုင်းမှထို့နောက်အတွင်းစိတ်ဆလိုက်ရွေ့လျား။ တကယ်တော့တှငျအဘယျကျွန်တော်တစ်ဦးလာကြတယ်စက်ကိုခေါ်ကျနော်တို့မကြာခဏလာကြတယ်စက်ကိုပဌနာကားအဘယ်သို့သောဘုံအမည်, ဖြစ်ပါတယ်။ သိပ္ပံနည်းကျအမည်ဖြင့်စာနယ်ဇင်းကိုခေါ်ရပါမည်။
သတ္တုအမှတ်အသား၏အရည်အသွေးအပြောင်းအလဲနဲ့အပြီးသတ် - Alice Factory-Alice စက်ရုံကိုတင်းကြပ်စွာထိန်းချုပ်ထားသည်
ဟိုက်ဒရောလစ်စာနယ်ဇင်း (Hydraulic သတင်းစာ) သည်အထူးဟိုက်ဒရောလစ်ရေနံကိုအလုပ်လုပ်သောအလတ်စားအဖြစ် အသုံးပြု. စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်တစ်ခုအနေဖြင့်ဟိုက်ဒရောလစ်စုပ်စက်ကိုအသုံးပြုသည်။ ဟိုက်ဒရောလစ်ရေနံသည်ဟိုက်ဒရောလစ်ပိုက်လိုင်းကိုစုပ်စက်၏အင်အားစုမှတစ်ဆင့်ဆလင်ဒါနှင့်ပသပမှတစ်ဆင့်ဆလင်ဒါနှင့်ပစ္စတင်ကို0င်ရောက်ပြီးလိုက်ဖက်သည့်တံဆိပ်ခတ်ထားသောဆလင်ဒါ / ပစ္စတင်ဆေးများတွင်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသနည်း, အဆိုပါဟိုက်ဒရောလစ်ရေနံယိုစိမ့်နိုင်အောင်တံဆိပ်ခတ်ခြင်း။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်တစ်လမ်းတည်းအဆို့ရှင်မှတစ်ဆင့်ဟိုက်ဒရောလစ်ရေနံသည်ဆလင်ဒါနှင့်ပစ္စတင်စက်ကိုစက်ပိုင်းဆိုင်ရာစက်ယန္တရားတစ်ခုအနေဖြင့်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာစက်ယန္တရားတစ်ခုအဖြစ်ဖြည့်ဆည်းရန်ကြိုးပမ်းမှုပြုလုပ်ရန်ရေနံတိုင်ကီတွင်ဖြန့်ဝေသည်။
လက်ကားရောင်းဝယ်ရေးအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပရိဘောဂတံဆိပ်ထုတ်လုပ်သူ - အဲလစ်အားစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ပြုလုပ်သည်
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပရိဘောဂတံဆိပ်ထုတ်လုပ်သူ - အဲလစ်ကျွန်ုပ်တို့ (အဲလစ်) သည်ပရိဘောဂအခွင့်အလမ်းများထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီး, လူမီနီယမ်, ကြေးနီ, ကြေးဝါ, ကြေးဝါ, PVC တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ထုတ်လုပ်သောဆိုင်းဘုတ်များသည်အလင်းနှင့်လက်တွေ့ကျ, လှပပြီးရက်ရက်ရောရောဖြစ်ပြီးလက်ရာမြောက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များ, ဒါဟာဘုံမျက်နှာပြင်အဖြေဖြစ်ပါတယ်အဲလစ်လက်ကားရောင်းဝယ်မှုသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပရိဘောဂတံဆိပ်ထုတ်လုပ်သူ Alice ကိုစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ထုတ်လုပ်သူ Alice သည်တူညီသောအရည်အသွေးနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။